Iyi ndiyo mitsara mitsva yemitambo yeApple Watch kubva kuUAG | Ndinobva mac
Iyi ndiyo mitsara mitsva yemitambo yeUAG Apple Watch
Gore rega rega, sezvo zhizha rinosvika, Apple inoburitsa yakateedzana tambo-yakasarudzika tambo dzakagadzirwa nesilicone uye nylon. Asi haasi iye ega. Mugadziri wezviitiko uye mabhendi eApple Watch UAG achangotanga mutsva mutsva wemabhandi ezhizha, tambo dzakagadzirwa nesilicone.
Chinhu chikuru cheiyo nyowani mhando yeUAG tambo, dzakabhabhatidzwa seScout Apple Watch uye Civilian Apple Watch, dzakagadzirwa nesilicone uye dzinotipa isu sekukwezva kukuru yechinyakare wachi wachi bharanzi mashandiro, mashandiro ayo Apple achiri asingaite muhuwandu hwemitambo tambo.
Vazhinji vashandisi veApple Watch havavimbe mashandiro anopiwa neApple Watch mabhanhire emitambo, saka mhinduro iyo UAG inotipa mune ino nyowani renji tambo, inogona kunge iri mhinduro iyo vashandisi vane hanya nekuvimbika kweApple Watch yako kana vanoda rudzi urwu rwetambo.
1 Scout Apple Tarisa Mabhendi
2 Civilian Apple Tarisa Mabhendi
Scout Apple Tarisa Mabhendi
UAG's Scout renji reApple Watch mabhendi anowanikwa mune mavara nhema, maorivhi uye orenji, inowirirana neApple Watch 38, 40, 42 uye 44 mm. Mutengo wayo $ 29,95 uye tinogona kuitenga yakananga paUrban Armor Gear webhusaiti.
Civilian Apple Tarisa Mabhendi
Iyo yeCivilian Apple Watch tambo yemubhedha inowanikwa mune maviri-mavara musanganiswa: slate neorenji kune rimwe divi uye dema uye orenji kune rimwe racho. Mutengo wemabhande aya unokwira kusvika pa $ 39,95 uye iwo anowirirana neye 38, 40, 42 uye 44 mm mamodheru.
Mabhande ese ari maviri anotipa isu sisitimu iyo inochengetera yakawandisa tambo mukati tambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyi ndiyo mitsara mitsva yemitambo yeUAG Apple Watch
Apple yatotengesa iyo Eero Mesh WIFI mutsetse muchitoro chayo chepamhepo